China mpanamboatra hena masaka mangatsiaka mangatsiaka mpanamboatra sy mpamatsy | ALLCOLD
Vacuum Cooler dia teknolojia fanamafisana haingana. Izy io dia mampihena ny tsindry ao amin'ny efi-trano amin'ny alàlan'ny fantsom-bovoka ka alaina ny rano mangotraka ao anaty vokatra mba hampidinina ny rano mba handraoka ireo vokatra ireo ho 'hafanana, avy eo hampihena ny vokatra'
mari-pana haingana. Betsaka ny tombony azo avy amin'ny fampangatsiahana voajanahary sy ny fampangatsiahana voajanahary ao amin'ny trano fampangatsiahana.
Hafainganana haingana, haingana dia maharitra 30 minitra vao mangatsiaka amin'ny 100 ℃ ka hatramin'ny 10 ℃. Ny hafanana fanamainana fanamiana eo afovoany sy ambonin'ny sakafo. Tsy misy fepetra manokana momba ny habeny, ny fisehoany ary ny fomban'ny vokatra TSY misy "fandotoana faharoa" ho an'ny fampangatsiahana ao anaty efitrano vy tsy mitoka-monina. Miampita haingana ny mari-pana 25-50 ℃
izay tena mety amin'ny karazana bakteria.
AllCOLD vacuum cooler izao dia be mpampiasa amin'ny fampangatsiahana ny indostrian'ny sakafo masaka toy ny fampangatsiahana hena, akoho amam-borona, vary sy voanjo, vokatra, legioma, mofo, mofomamy sns. Andian-mari-pana mahazatra mba hangatsiatsiaka ny sakafo manodidina ny 25 ℃ ~ 30 ℃, ny andiam-panafana ambany mankany amin'ny mari-pana farany mety ho ambany noho ny 10.
1. Teknolojia PCM manokana no raisina ao anaty fandrika mangatsiaka, hanatsarana tsara ny fahafaha-misambotra rano manimba ny vata fampangatsiahana sy ny vata fampangatsiahana avy amin'ny etona betsaka amin'ny sakafo masaka.
2. Ny firafitra fantsom-by vy tsy misy vy dia raisina ao anaty fandrika mangatsiaka hanatsarana ny ampahany manan-danja azo antoka dia marika iraisam-pirenena malaza.
3. Teknolojia fanaraha-maso tsindrona tsindrona manokana hamahana ny olana mikorontana amin'ny fampangatsiahana ny vokatra ranon-javatra miaraka amin'ny rafitra PLC mandroso sy ny efijery, ny Symbol dia mampiseho ny fiasa sy ny fihazakazahana, mazava sy mety.
4 Hierarchical operation sy cryptoguard dia raisina amin'ny asan'ny fitaovana:
Mpiasa miasa: ny keystroke mekanika fotsiny (on / off)
Teknolojia famokarana: ho an'ny fametrahana ny masontsivana fanodinana ihany.
Injeniera: ho an'ny famafana fitaovana, fikojakojana ary famaritana lesoka.
5. Rafitra fandidiana mandeha ho azy sy tanana, mihazakazaka sy miasa ny masinina dia azo ovaina kokoa ary azo itokisana.
6. Ny fitaovan'ny chambre Wacuum dia vy vy SUS304, natao mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny GMP.
Modely sy famaritana mangatsiaka kokoa:
Previous: Cooler Vacuum Foods steamed